Guddiga arrimaha Bulshada Aqalka sare oo kulan la tashi ah la qaatay hindise sharciyeedka mihnadlayaasha Caafimaadka Qaranka +Sawirro – Radio Muqdisho
Guddiga arrimaha Bulshada Aqalka sare oo kulan la tashi ah la qaatay hindise sharciyeedka mihnadlayaasha Caafimaadka Qaranka +Sawirro
Guddiga arrimaha Bulshada Golaha Aqalka sare BFS ayaa Dowlad Goboleedyada Dalka kulan la tashi ah kala yeeshay hindise sharciyeedka Mihnadlayaasha Caafimaadka Qaranka.
Kulanka ayaa waxaa furay Guddoomiyaha Guddiga horumarinta adeegga Bulshada ,arimaha Bini,aadannimada warfaafinta dhaqanka ee Golaha Aqalka sare , Sen; Axmed Macallin Cumar Nadiif.
Guddoomiyaha ayaa sheegay in kulankan uu yahay la tashi looga hadlayo hindise sharciyeedka mihnadlayaasha Caafimaadka Qaranka.
Hindise sharciyeedka mihnadlayaasha caafimaadka Qaranka ayaa qodob qodob loo aqriyay, iyadoo xubnaha Dowlad Goboleedyada ay iyaguna fikirkooda ka dhiibteen.
Xoghayaha Guddiga horumarinta adeegga Bulshada ,arimaha Bini,aadanimada warfaafinta dhaqanka Golaha Aqalka sare, Sen, SamSam Daahir Maxamuud, ayaa gaba gabada kulanka sheegtay in ay muhiim tahay la tashiga qeybaha uu khuseeyo sharcigan.
Hindise sharciyeedka Mihnadlayaasha caafimaadka Qaranka waxaa soo diyaariyay wasaarada caafimaadka XFS ,wuxuuna soo maray Golaha Shacabka BFS, iyadoo haatan uu horyaallo Golaha Aqalka sare ee BFS.
Ra’iisul Wasaare Khayre iyo Madaxweyne Ku-xigeenka Midawga Yurub oo Brussels Ku Kulmay “Sawirro”
Ra’iisul Wasaare Khayre iyo Madaxweyne Ku-xigeenka Midawga Yurub oo Brussels Ku Kulmay "Sawirro"